जतिसुकै घनिष्ठ साथी भएपनि गोप्य राख्नुहोस् यी ३ कुरा ! - Ramechhap Online
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/जतिसुकै घनिष्ठ साथी भएपनि गोप्य राख्नुहोस् यी ३ कुरा !
जतिसुकै घनिष्ठ साथी भएपनि गोप्य राख्नुहोस् यी ३ कुरा !
एजेन्सी । हरेक मानिसहरुलाई साथी विनाको साथ नरमाइलो लाग्छ । किनभने यहाँ बच्चादेखि वृद्धसम्मको आ आफ्नै उमेर समुहको साथी हुन्छ । जसले एक साथीलाई समस्या पर्दा अर्को साथीले निस्वार्थ सहयोग गर्छ ।क असल साथी बनाएपछि उसँग हरेक कुराहरु साटाँसाट गर्ने गरिन्छ । जसले आफ्नो हरेक समस्याको समाधान गरिदिन्छन् । जसले हाम्रो तनाव कम हुन्छ र हामी आफुसँग भएको पिडालाई भुल्छौ।त्यसैले हामी साथीसँग आफ्नो जरादेखि टुुप्पासम्मको कुरा भन्छौ ।
त्यसैले विचार गर्नुस , यदि मिल्ने साथीसँग तपाईको सम्बन्ध विग्रियो भने शत्रु पनि बन्न सकिन्छ।त्यसैले यी कुराहरु विर्सेर पनि नभन्नुहोस्।पहिलो आफ्नो घरपरिवारको आर्थिक कुरा सुनाउनु हुदैन्।
दोस्रोमा परिवारको भित्री कुरा र सम्बन्धहरु पनि सुनाउनु हुदैन्।तेस्रोमा आफ्नो श्रीमतीसँगको भएका गोप्य कुराहरु पनि सुनाउन हुदैन् । किनभने आज घनिष्ठ बनेको मित्र भोली दुश्मन पनि हुन सक्छन्। त्यसैले विचार गर्नुस् ।
काठमाडौं । नायिका ऋर्चा शर्माले यसै वर्ष विवाह गर्ने संकेत गरेकी छिन् । केही समययता राणा परिवारका युवासँगको प्रेममा रहेको बताइएकी ऋर्चाले यसअघि एक अन्तर्वार्ताको क्रममा २०७६ सालमा विवाह गर्ने याेजनामा रहेकाे बताएकी थिइन् ।ऋचाकाे समकालीन साथी प्रियंका कार्की पनि यसै वर्ष बैवाहिक बन्धनमा बाँधिदैछिन् ।
ऋर्चाले पनि विवाह गर्ने निर्णय लिएकी छिन् । फिल्ममा अभिनय गरेकी ऋर्चा पछिल्लो समय विभिन्न रियालिटी शोहरुमा निर्णायकको भूमिकामा समेत देखिने गरेकी छिन् ।
गतवर्ष ऋर्चाले हरर फिल्म ‘सुनकेसरी’ निर्माण गरेकी थिइन् । उनलाई यो फिल्मले सोचे जति सन्तुष्टि दिएन । अब उनले हरर फिल्म खेल्ने इच्छा समेत नभएको बताएकी छिन् ।फिल्म निर्माण तिर नदेखिएकी ऋर्चाले यही वर्ष ‘पाङग्रा एक्सपेस्र’ मार्फत व्यवसाय तिर हात हालिन्। अब भने उनी घरजम गर्ने मुडमा पुगेकी हुन् ।
झापा काण्डको नालिबेली : राम्री युवती देखेर भिडियोमै यौन लिला गर्दा यसरी फसे धनाड्य